Blu-Ray BD DVD CD Video Player Software Free Download | | BLOG OS-DUKAANKA
November 19, 2017 admin Codsiga, Computer, Driver, Taageerada OSGEAR, Products, kaydinta 0
Cajalid Blu-ray (gaabiyay BD) waa mid ka mid ah jiilka soo socda ee qaabab disc ka dib markii DVD ku kaydiso video tayo sare leh iyo awoodda sare xogta. Cajalid Blu-ray waa faahfaahinta disc-galinaya jiilka xiga qorsheysan by Blu-ray cajalid Ururka, oo ka kooban Sony iyo Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., iyo Sony hogaaminayo horumarinta hoose-dhexe ee badeecadaha la xiriira ee 2006. cajaladood Blu-ray ayaa la magacaabay akhriska iyo wax qoridda isticmaalaya dogob laser buluug ee Milanello ah 405 nanomitir (a 650 Milanello nanometer akhristaha cas, waayo, DVD-yada iyo a 780 nanometer infrared Milanello, waayo, CDs). Halkan waa koox ka mid ah Blu-ray software gubashadii loo maqli karo xirfadle wanaagsan, qof walba si ay u wadaagaan.
Booqashada software More talinayo hoos ~~~
Talinaynaa for Mac OS
U bandhigidda Hot ~ ~ ~
Fadlan isticmaal iyo taageero software asalka ah
Site rasmiga ah
Leawo dhaqmo ciyaaryahan disc sida free Blu-ray, ciyaaryahan DVD free disc, free 4K HD video, ciyaaryahan file ISO free, iyo ciyaaryahan audio free. In app software ciyaaryahan disc free Blu-ray ah, waxaa u ciyaara cajaladood Blu-ray waayo gebi ahaanba bilaash ah, iyo hoos u socon cajaladood DVD loo maqli karo, iyadoo aan loo eegayn ay yihiin ganacsi ama si joogta ah. Waa software ugu wanaagsan ee si xor ah u ciyaaro Blu-ray on Windows (ay ka mid yihiin Windows Vista, XP, 7, 7, 8, 8.1, iyo 10).
PowerDVD buuxaan movie gaar ah, music iyo sawir qaababka lagama maarmaan ah abuurista ah hortiisa immersive unbeatably & waayo-aragnimo codka. Oo dadka raadinaya inay abuuraan dareenka shineemo guryahooda iyaga u gaar ah a, PowerDVD hadda leeyahay technology adduunka ugu horeysay lagama maarmaan ah si aan u weyneyno iman kara ee aad 4K iyo HDR telefishinada!
Macgo Blu-Ray ciyaaryahan
Standard Versiom - The best ciyaaryahan Blu-ray software that supports BD, files ISO iyo fayl BDMV la dardargelinta hardware aan caadi ahayn - BluFast MX.
Version Pro - Taageerada Blu-ray full-saftay menu In kor loo qaado tayada maqal ah asalka socon la qaabab warbaahinta kala duwan
Soo qaado Hollywood guriga loo maqli karo ee video keentay, Blu-ray iyo software DVD, Corel® WinDVD® Pro. From-xalinta sare videos 4K iyo HEVC (H.265 *), si 3D video, DVD-yada iyo Blu-ray, raaxaysan kala duwan oo badan oo qaabab tayo cajiib ah, codka Dolby oo dheeraad ah. gacanta ku dareen in la cusbooneysiiyey, interface casri ah oo aad si fudud ha video ganaax-habayn iyo audio. Plus, raaxaysan loo maqli macaan iyadoo cusub 240 fps waxqabadka.
AnyMP4 Blu-Ray ciyaaryahan
Play cajalid Blu-ray / Folder / file kasta image ISO, 4K video iyo HD 1080p video la image qeexitaanka sare iyo tayada video aad u fiican.
Qalabka Blu-ray waa dhan-in-mid Blu-ray software, oo ka kooban Blu-ray Player, Blu-ray Ripper, iyo Blu-ray Copy Platinum software. Iyada oo ay taasi Qalabka Blu-ray xoogga iyo xirfadda, dadka isticmaala si fudud u qaban karto arin kasta Blu-ray oo wuxuu ku raaxaysan ah waayo-aragnimo Blu-ray aan caadi ahayn.
Ciyaaryahan awood in ka ciyaari kara Blu-ray disc, folder Blu-ray, disc DVD / folder / file ISO iyo warbaahinta caadi files iyo videos habsami. Waxaad awoodaa inaad si toos ah u ciyaaro wax disc Blu-ray la HD 1080p saamaynta muuqaalka iyo ciyaaro H.265 / HEVC habaynteeda 4K files video losslessly on PC. Waa maxay more, this Aiseesoft Blu-ray Player sidoo kale u dhaqmo sida ciyaaryahan warbaahinta caadi ah wax HD / SD files video oo aad awoodo inay ku raaxaystaan ​​saamaynta immersive audio.
Hel more Taageero iyo waxyaabaha Blu-Ray ~ Riix halkan
processor Tababaraha qalab Processor Telefoonka gacanta Taageerada Driver Taxanaha Model Device taageero darawalka Nokia Software Samsung Intel Technology 64-Windows yara OS-DUKAANKA processor Technology_Internet Ujeeddo Dadweynaha Graphics HD HTC fasiraad sharci ah
Server Intel Nokia Technology_Internet taageero darawalka 64-Windows yara Samsung Galaxy HTC Processor Sony Ericsson Qualcomm Technology Tababaraha qalab Software Telefoonka gacanta Intel processor fasiraad sharci ah Samsung casriga ah Graphics HD Taageerada Driver Taxanaha Ujeeddo Dadweynaha processor Model Device OS-DUKAANKA